“သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ကိုဝင်းကျော်ရဲ့ထူးခြားချက်များ…”
ကျောင်းသား အယောက် ၅၀ စာအတွက် စာသင်ခုံတွေလှူခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်းတို့မိသားစု
ကျောင်းသား အယောက် ၅၀ စာအတွက် စာသင်ခုံတွေလှူခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်းတို့မိသားစု အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းက သူ့ရဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ဖြူးမြို့နယ်အတွင်းက မူလတန်းကျောင်းလေးမှာ စာသင်ခုံ ၅၀ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဟာ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ အလှူအတန်းတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပရဟိတအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းက […]
“အဖြူရောင် ၀တ်စုံလေးနဲ့ မြင်သူတကာ ငေးလောက်အောင် လှနေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ”
ပရိသတ်တွေကို အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ကောက်ကြောင်း အလှကလည်း ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သင်ဇာက သူမရဲ့ ပွဲတက် ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ […]
“အမေရိကမှာ ပြုလုပ်တဲ့ စက်ရုပ်တီထွင်မှုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ အသက်၈နှစ်အရွယ် သမီးလေး မေဖူးပွင့်ဇွန်”
“အမေရိကမှာ ပြုလုပ်တဲ့ စက်ရုပ်တီထွင်မှုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ အသက်၈နှစ်အရွယ် သမီးလေး မေဖူးပွင့်ဇွန်” နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးမှာလည်း ကျနော်တို့ မသိလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေကလည်း အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာနဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း နောက်ကျ ကျန်မနေခဲ့ပါဘူး ။ […]
Counterပြန်လာတဲ့ ဗုံးသီးကို တစ်ဖွဲ့လုံးကျသွားမှာစိုးလို့ ဗုံးသီးပေါ် ရင်ဘတ်နဲ့အုပ်ပြီး …. မြင့်မြတ်စွာ အသေခံသွားတဲ့ ဗိုလ်​ကြီး ရဲကိုဦး
Counterပြန်လာတဲ့ ဗုံးသီးကို တစ်ဖွဲ့လုံးကျသွားမှာစိုးလို့ ဗုံးသီးပေါ် ရင်ဘတ်နဲ့အုပ်ပြီး …. မြင့်မြတ်စွာ အသေခံသွားတဲ့ ဗိုလ်​ကြီး ရဲကိုဦး ဒီကောင် ကလည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ မင်းတို့နဲ့ အကြိုက်ချင်းတော့ အကုန် ဘယ်တူကြမလဲဗျား … စစ်သား မကောင်းရင် စစ်သားနာမည်တပ်ပြီး ပြောပါ […]
ဇာတ်ကားရိုက်ရင်း ခြေထောက်မှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ဇာတ်ကားရိုက်ရင်း ခြေထောက်မှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဇာတ်လိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ပေါက်တူးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ပြန်ထိခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က “ဇာတ်လိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနဲ့ ခြေထောက် ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းအတွက် ပေါက်တူးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရင်း သူမရဲ့ ခြေထောက်ကို […]
ဇနီးဖြစ်သူ ချစ်သုဝေရဲ့စကားဝိုင်းကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ အတူတူတက်ရောက်ပေးခဲ့တဲ့ လင်းလင်း
ဇနီးဖြစ်သူ ချစ်သုဝေရဲ့စကားဝိုင်းကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ အတူတူတက်ရောက်ပေးခဲ့တဲ့ လင်းလင်း နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ တို့ မောင်နှံနှစ်ဦးက အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ရပ်တည်နေနိုင်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ မောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း သူမရဲ့ မိသားစုလေးကို သာယာလှပအောင် တည်ဆောက်နေသူတွေပဲ […]